Funda ukuba ungawenza njani umsebenzi wokufunda kwescreen kuMncedisi kaGoogle | I-Androidsis
Ungayikhubaza njani (okanye uyenze isebenze njani) ukufundwa kwescreen somncedisi kaGoogle
Lo msebenzi ukuze Umncedisi kaGoogle unokufunda isikrini sakho kwaye ngenxa yoko ucebise umxholo xa uyivula nakweyiphi na ikhusi, inokuba yingcongolo, nangona ikwanazo neentsingiselo zayo ezimbi ngenxa yokuba inokuba yinto "engathandekiyo" ukuba siyalibala ukuba siyasebenza.
Oko kukuthi, unika imvume yokuba uMncedisi kaGoogle "athathe" konke okubhaliweyo kwiscreen ikunike ulwazi malunga nento ekwisikrini. Kuqala kunokuba yeyona nto inkulu, kodwa mhla silibale ukuba unalo msebenzi kwaye sinikezela ngendlela yolwazi olubucayi okanye lwangasese, iya kuba ifunda yonke into ukuyigcina kwiiseva zabo.
1 Ukulunga kwayo
2 Iingxabano zakhe
3 Uyenza njani imisebenzi yokufunda kwescreen yoMncedisi kaGoogle
Nika uMncedisi kaGoogle obu buchule kumaxesha amaninzi unokuba ngumvuzo omkhulu isebenza kakuhle xa ufunda oko sinakho kwiscreen. Kwangokunjalo, kuWhatsApp, ukuba ugxa wethu usixelele ukuba bakhuphe imovie entsha, xa usebenzisa uMncedisi kaGoogle embuza ukuba "ngubani umphathi", uya kuthi ngokukhawuleza asixelele igama, isamente kunye nolunye ulwazi olunokungena Iluncedo.
Kwenzeka into efanayo nakwindawo yokutyela. Umlingane wethu usixelele ukuba basimemele kwindawo yokutyela edolophini kwaye basixelele igama. Sibuze uMncedisi kaGoogle ngenqaku onayo kuGoogle My Businness, kwaye iya kusinika ulwazi olufanelekileyo, indawo okuyo, amanqaku aphakathi kunye nabanye.
Ngamanye amagama, isisindisa ngokwenene ekukhupheleni lonke ulwazi esinalo kwiscreen uyazi kakuhle ngemovie entsha, ingoma, iziphumo zemidlalo ibhola ekhatywayo okanye naluphi na olunye ulwazi oluza engqondweni.
Eyona ngxaki inkulu yile yokuba, nangaliphi na ixesha, sinike uMncedisi kaGoogle imvume yokufunda iscreen (esiqhelo kwezi ndaba sithi ewe), silibale, ziiveki ezimbalwa kwaye asiniki akhawunti esebenzayo . Ngamanye amagama, sithetha ngoMncedisi kaGoogle ukuba akwazi ukufunda isikrini, kodwa ayizukulumkisa ukuba iyayenza xa ingacelwanga okanye yona.
Nantsi iqala umba wabucala kwaye kutheni umthetho omtsha wokukhusela idatha waseYurophu u-O GDPR wenziwa kunyaka ophelileyo. Kuya kufuneka sizibuze imibuzo enje, ngaba uMncedisi kaGoogle uhlala ejonga isicatshulwa kwiscreen sam ngalo lonke ixesha ndiyivula ngelixa ndikwi-third-app? Okanye ulinde ngokwenene ukuba sicele uncedo lwethu ngeminye yemiyalelo egxilwe?
Ndiyathetha, ukuba sithi "Kulungile Google", "Yintoni ekwiskrini sam? Uya kuphendula kuthi. Kodwa, kwaye sinayo iapp egxile kubucala, Ngaba iya kufunda yonke into kwiscreen xa sikunye nale app? Emva koko singaya myactivity.google.com kwaye ujonge ukuba akukho kopi ikwi-Intanethi yayo yonke into oyifunayo kwiscreen. Oko kukuthi, kucingelwa ukuba kwenza ikopi yendawo yezo mizuzu xa "ifunda" isikrini sethu. "
Kungangcono ukuba uGoogle yiza ngaphambili uxele ukuba wenza ntoni ngayo yonke loo datha kwaye ke sasihlala sizolile. Kulungile siza kukubonisa ukuba ungawenza njani okanye ungasebenzi umsebenzi wokufunda iscreen.
Uyenza njani imisebenzi yokufunda kwescreen yoMncedisi kaGoogle
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufika kweso sikrini. Masihambe kunye:
Sivula usetyenziso lukaGoogle.
Ngoku kuMncedisi kaGoogle.
Kwithebhu ephezulu yoMncedisi sele sikrobile ezantsi.
Siza kubona indawo «Ngokubanzi» nge ukhetho lokusebenzisa umxholo wescreen.
Siyenza okanye siyenze isebenze njengoko sifuna.
Yenziwe, ungayisebenzisa ukufunda isikrini kwaye ke sebenzisa umxholo wayo ukukubonisa umxholo onxulumene noko. Unokucela noMncedisi kaGoogle ngqo ukuba ufunde isikrini. Umsebenzi oqwalasele imfihlo yethu kwaye kubalulekile ukuba wazi ukuba ukhona kunye nendlela yokuwusebenzisa. Kwaye ke, IXiaomi Mi 9 iya kuba neqhosha layo kuMncedisi weGoogl.e
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungayikhubaza njani (okanye uyenze isebenze njani) ukufundwa kwescreen somncedisi kaGoogle
Xiaomi Black Shark 2: I-brand entsha yokudlala ye-smartphone
Into eyenziwa yi-Android kwi-Android inokulinganiselwa nguGoogle kuhlobo 10.0